Cumar Cabdirashiiid oo ka horyimid sheegayna inuu san Qayb ka Ahayn Bayaan xalay soo Baxay - HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Cumar Cabdirashiiid oo ka horyimid sheegayna inuu san Qayb ka Ahayn Bayaan...
Cumar Cabdirashiiid oo ka horyimid sheegayna inuu san Qayb ka Ahayn Bayaan xalay soo Baxay
Ra’isul Wasaarihii hore ee Somalia Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke ayaa shaaciyey inuusan waxba kala socon qoraal la sheegay iney wadajir u soo saareen isaga iyo madaxdii hore ee Puntland.
Qoraalkan oo ay ku saxiixnaayeen Madaxwayneyaashii hore ee Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole iyo C/wali Gaas iyo weliba Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Sharmaarke ayey kaga horjeesteen go’aanadii Isimadii 5-ta ahaa kasoo saareen xalka xiisadda hay’adda PSF ee ka taagneyd Boosaaso.
Hase ahaatee Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke ayaa sheegay in qoraalkan aan lagala tashan.
“Bayaan loo qaybiyey warbaahinta laguna sheegay inuu kasoo baxay wafdi aan ku jiray ayaan wax ka oran. Waxaan cadayn inaan la igalana tashan oo aanan qayb ka ahayn Bayaankan soo baxay iyo hadalada uu xambaarsana. Bosaso Dhibka soo gaaray xal iyo baaq nabadeed keliyaa dan u ah” ayuuu yiri Cumar C/rashiid oo qoraal kooban ku soo daabacaday boggiisa Twitterka.
Previous articleMaraykanka oo Markale Caawa u hanjabay Madaxda soomaalida Qaswadayaalna ku tilmaamay
Next articleMaamulka Koonfurgalbeed oo Shaaciyay kuraas Dhwaan la Dooran doono
Askari aad looga yaqaanay Degaanada Galmudug oo Galabtay Ku Geriyooda Weerar lagu Qaaday Alshabaab
Galmudug weerar Culus Ku qaaday alshabaab
Cali ciid Madaxweyne ku xigeenka Galmudug oo si aan Caasi ahayn loogu soo dhaweyey Dhuusamareeb
Askari aad looga yaqaanay Degaanada Galmudug oo Galabtay Ku Geriyooda Weerar...
Cali ciid Madaxweyne ku xigeenka Galmudug oo si aan Caasi ahayn...